Uvavanyo lwekhwalithi ye-oneplus 6 yekhamera vs galaxy s9 + kunye ne-pixel 2 xl
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-OnePlus 6 vs Galaxy S9 + vs Pixel 2 XL: ukuthelekiswa kwekhamera yokukhanya okungaphantsi
I-OnePlus 6 vs Galaxy S9 + vs Pixel 2 XL: ukuthelekiswa kwekhamera yokukhanya okungaphantsi
Galaxy Note 9 vs iPhone X vs LG G7 vs OnePlus 6 uthelekiso lwekhamera
I-Sony Xperia XZ3 vs Galaxy Qaphela 9 vs Pixel 2 XL vs iPhone X ukuthelekisa ikhamera
I-iPhone Xs Max vs Galaxy Qaphela 9 vs Pixel 2 XL ukuthelekisa ikhamera
I-iPhone XS vs Pixel 2 XL vs Galaxy Qaphela 9 vs iPhone X ukuthelekiswa kwekhamera ekhanyayo
I-Huawei Mate 20 Pro vs iPhone XS Max vs Galaxy Qaphela 9 Ukuthelekiswa kwekhamera
I-Huawei Mate 20 Pro vs iPhone XS Max vs Galaxy Qaphela i-9 NIGHT Camera Thelekisa
I-pixel 3 vs iPhone XS vs Galaxy Qaphela i-9 Imfama yokuThelekiswa kweKhamera Iziphumo
Ukuba bekungekacaci ngoku, & ampos; kudala samkela i-OnePlus kwiligi yokuqala. Kwaye oku kuthetha ukuba ngaphandle kweefowuni kunye neendleko eziphantsi kakhulu xa kuthelekiswa neyona smartphones iphambili phaya, thina kunye neapos sizifumene ngokungaguquguqukiyo siyibeka ngokuchasene neyona ilungileyo phaya. Esinye seziseko zokugqibela zokugubungela i-OnePlus ibe yikhamera. Ayisiyo yokuba bekungalunganga ngalo lonke eli xesha, kodwa masitsho ukuba bekungeko & apos; zikwinqanaba elifanayo nabahlaseli abafunyenwe kwi-iPhone yakutshanje okanye kwi-Galaxy S.
I-OnePlus 6 vs Galaxy S8 + vs Pixel 2 XL
Ke, i-OnePlus 6 ngenene yajika yaba yinto enkulu kakhulu. Ngokuqinisekileyo, inkampani inyuse ixabiso lemodeli yayo entsha kwakhona, kodwa kunjalo nakwabanye abavelisi abaninzi phaya, kwaye xa kuthelekiswa, i-OP6 isaphuma njengexabiso lokubonelela. Le modeli intsha inomdla, nangona kunjalo. Inoyilo olutsha kraca, ene-screen sonke ngaphambili, kunye ne-chipset ye-beefiest ekhoyo kwiifowuni ze-Android. Inekhamera entsha ye-16 MP enesenzi esikhulu kunye nokuvula ububanzi. Ukulindela kukuba ezi mpawu kufuneka ziyivumele ukuba ithathe ezinye iifoto ezintle kwiimeko ezinokukhanya okuphantsi. Ukuza kuthi ga ngoku, sivavanye ikhamera ye-OnePlus 6 kunye neapos; ngokwe imifanekiso eqhelekileyo, yemini (yenziwe kakuhle), kwaye Iifoto zemifanekiso (Wenze kakuhle). Eli lixesha lokuba ujonge ikhamera yayo kunye ne-apos; ukukhanya okuphantsi / amandla exesha lobusuku. Ukwenza oko, thina kunye neapos sizokuyibeka ngokuchasene neyona mifanekiso mibini ye-Android ibalaseleyo: i-Galaxy S9 + kunye nePixel 2 XL.
Nantsi into esiza kuyenza. Kwisigcawu ngasinye kwezi zintlanu zingezantsi, siza kunika amanqaku (1-10, 10 ukuba max), kwaye emva koko siza kubona ekugqibeleni ukuba yeyiphi imodeli ekwaziyo ukuqokelela awona manqaku maninzi.
Kule ndawo yokuqala, i-OnePlus 6 ibonisa amandla aphawulekayo okubethelela ibhalansi yemvelo. Oku kuqatshelwa ikakhulu kuyinyani kuninzi lwezigcawu ziseleyo. Ngokwahlukileyo, zombini i-Galaxy S9 + kunye nePixel 2 XL ijikeleza kubuhle obufudumeleyo, kodwa ngelixa izinto zihlala zinyamezeleka kwisithombe esivela kwi-Galaxy S9, i-Pixel 2 XL ingqina ukuba i-tad igqithile kukhetho lwayo lobushushu apha.
Iindaba ezimnandi kukuba zonke iifowuni ezintathu zivelisa inqanaba elibi ngokulinganayo leenkcukacha, ngaphandle kokuphumelela ngokucacileyo. Esi sisiqalo esomeleleyo se-OnePlus 6, masijonge ukuba ngaba i-apos iyakulawula ukuyigcina!
< OnePlus 6 IPixel 2 XL>
IPixel 2 XL
Apha, sibabona bobathathu abakhuphisana ngokulinganayo ngokulinganayo. I-Pixel 2 XL iwugubungele umfanekiso kancinane (okanye ezinye ezimbini zitsale ukuncitshiswa kwengxolo ngcono), kodwa le ndawo ikwakhona apho iinzame zayo ze-HDR zihlawule khona - ukuba ujonga kwicala lasekhohlo lefoto, imithi Kukho ukukhanya okukhanyisiweyo kuphela kwimifanekiso yePixel 2 & apos - ayisiyiyo le nkcukacha ibaluleke kakhulu apha, kodwa kunjalo. Ngaphandle kwalonto, akukho mahluko okhoyo phakathi kwamagorha amathathu ekhamera. Sisiphi, kwakhona, sisiphumo esihle se-OnePlus 6- khumbula, yiyo kunye neapos yayo ekufuneka ibonakalisile ukuba ingadlala namakhwenkwe amakhulu apha. Ukuza kuthi ga ngoku, ilungile kwi-OnePlus. I-Galaxy S9 + ize nomfanekiso oqinileyo, kodwa ayenzanga lukhulu ukwahlulahlula. Ukuba kukho nantoni na esinokukhalaza ngayo apha, yiyo kwaye akukho namnye kwaba bobathathu okwazileyo ukudonsa inqanaba elonelisayo leenkcukacha kule meko. Jonga ngokusondeleyo abantu kwindawo yokutyela, kwaye uza kubona zonke iintlobo zeebhloko ezi-blocky, ezinobunzima obukhulu. Masiqhubeke!
Sizibopha kwakhona iziqendu ezibini ezilandelayo kunye, kuba zinempawu ezifanayo. Ngesiqhelo sokuziphendulela sokuba zontathu izinto zibonakala ngathi zilungile, masiyeke ukukhahlela! I-Galaxy S9 + inokusibonisa into ezinye ezimbini ezingenakho & apos apha, kwaye ezo & apos yindawo yokuvelisa imibala eyahlukileyo. Ngokungafaniyo nayo, i-OnePlus 6 kunye nePixel 2 XL ibonakala ngathi ixhomekeke kakhulu kwisizinda esityheli. Oko kuyinyani ngokukodwa kwiPixel 2 XL, edla ngokugqithisa kule mpazamo kwimizamo yokwenza iswekile kumfanekiso. Ukuba ujonga ngokusondeleyo, i-Pixel 2 XL ikwangoyena ungoyena ungxamisekileyo, kunye ne-OnePlus 6 kunye ne-Galaxy S9 + eya kwifoto ecocekileyo ngaphandle kokuzincama okukhulu kwiinkcukacha.
< Galaxy S9+ IPixel 2 XL>
Wamkelekile kwiNdlu yeHaunted, amaqhawe! Owu, zeziphi iingozi ezijijekileyo ezilindele ngaphakathi ...
Kumaqhawe ethu e-cameraphone, iingozi apha ikakhulu zinento yokwenza nokukhanya okungonelanga kunye neendawo ezinamandla ezinokuthi zikhohlise ukuze zingagqithisi ngaphezulu okanye zingabonakali. Ngeli xesha, i-OnePlus 6 yenza into enomdla kwaye iphazamise ubukhali, ke ukuba ujonga ifoto ngobungakanani bayo kwaye ukusondela kufutshane, uya kuqaphela apho kwaye iiapos ziyingxolo enkulu phaya. Nangona kunjalo, ukuba unamathela kwisayizi encinci, yemidiya yoluntu kunye nomgangatho, oku kuyasebenza ngokuxhasa i-OP6, njengoko ifoto iphume kamnandi kwaye ibukhali. I-Galaxy S9 +, kwelinye icala, iphakamisa indlela elungelelene ngakumbi yobukhali nengxolo apha, kwaye ikwanelisa imibala kancinci. I-Pixel 2 XL, kwakhona kumzamo wayo wokunandipha imeko, impompoza ukubhengeza ngakumbi, kodwa isiphumo esingaphezulu kwe-HDR asenzi kwaye asisebenzi ndawo leyo. I-apos nayo ithambile.
Uhambo lwethu luphelela kwindawo apho ekugqibeleni sinokufumana ukutya okwenene. Ngaphambi kokuba sikwazi ukukhupha i-cheeseburger, nangona kunjalo, kwafuneka sithathe iifoto ezimbalwa zangaphandle-ebusuku. Sithanda ukukhetha i-Galaxy S9 + & apos; s kunye nePixel 2 XL & apos; iifoto apha, njengoko bekwazi ukutyhila okungaphezulu kwesakhiwo. Nge-OnePlus 6, umbono ubonakala ulungile, kodwa asithandi ukuba icala elinye lesakhiwo limnyama kangakanani. Le ngxaki ayibikho kunye nezinye ezimbini. I-Pixel 2 XL iphinda itshintshele ithoni etyheli, kodwa ilungile apha njengoko ingeyiyo kakhulu.
< OnePlus 6 Galaxy S9 +>
I-apos ibe ngumdlalo oshushu kule, kwaye sicinga ukuba singaphuma kunye neendlela ezimbalwa zokuthabatha. Inye kukuba i-OnePlus ubukhulu becala ibonakala ngathi ibambe ii-fellas ezinkulu kumdlalo wekhamera. Ukuba ingaya ezinzwaneni ezinje nge-GS9 + kunye nePixel 2 XL ngexesha lasebusuku, kuya kufuneka sivuyisane naba bafana ngomsebenzi owenziwe kakuhle! Okwesibini kukuba ukuba ufuna umfanekiso omkhulu kwanezona meko zinzima, i-Galaxy S9 iyaqhubeka nokubheja ekhuselekileyo- umgangatho kunye nokungaguquguquki kwakho & ampos; uya kuba nakho ukuphuma kule khamera ye-Samsung iyamangalisa, kwaye mhlawumbi okwesibini kuye akukho ngeli xesha. I-Pixel 2 XL, kunjalo, inkulu ngokunjalo, kodwa i-apos incinci kakhulu kwizinto ezineswekile, kwaye asazi ukuba ii-apos zithini kunye nala mthubi ububeke phantse kuyo yonke into ngeli xesha.
I-OnePlus, nangona kunjalo! I-OP 6 iyangqina ukuba 'ungaze uzinze' iseyimo yenkampani, kwaye asinako ukonwaba ukubabona besenzakala kunye neekhamera ezilungileyo ze-Android. Kwaye njengoko sisitsho, unokuva iibhotile ze-champagne ziqala ukuvela eShenzhen.
8 7 7 8 6 36
7 7 8 8 8 38
6 8 6 7 8 35
metro ngeefowuni eziphathwayo
IPhone 11 imibala kwi & t
I-iphone 7 kunye ne-v20
Fumana i-Samsung Galaxy S10e yasimahla kwi-Sprint xa uthenga i-Galaxy S10 / S10 +
I-Samsung Galaxy Note 7 iza nefilitha yokukhanya eluhlaza okwesibhakabhaka efana ne-iPhone kunye ne-Apos; s Mode Night
Ezi zixhobo zeLenovo Smart Clock kunye neZiboniso eziBalaseleyo zilungile kwiEcho Show ezinye iindlela
Uhlaziyo lwamva nje lwe-iOS luneziphumo ebezingalindelekanga
IPixel 2 kunye nePixel 2 XL vs iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus: uthelekiso lwee-specs
I-Samsung Gear Fit 2 Pro iya kubiza kakhulu kunonyaka ophelileyo kunye neeapos zeGear Fit
Idili: I-AT & T ye-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge ngoku zingama-200 eedola, isimahla imemori khadi eyi-128 GB
I-Apple inokukhupha i-iPhone 13 ngoSeptemba 24, iingcebiso zomhlalutyi umhla womsitho
Uyivula njani i-Moto E bootloader, uyincothule, kwaye ufake ukubuyiswa kwesiko